Namorona Fifandraisandavitra ny Tanàna Iray Ambanivohitra ao Afrika Atsimo Ary Nahavita Nampidina Ny Saram-pifandraisany · Global Voices teny Malagasy
Namorona Fifandraisandavitra ny Tanàna Iray Ambanivohitra ao Afrika Atsimo Ary Nahavita Nampidina Ny Saram-pifandraisany
Voadika ny 17 Mey 2017 12:49 GMT
Tao amin'ny tranonkalan'ny Association of Progressive Communications (APC) no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity, tranonkala izay mikendry ny hampiroborobo ny fampiasàna ny aterineto ho amin'ny rariny sosialy sy ny fampandrosoana lovainjafy.
Ny teny isiXhosa “Zenzeleni” dia midika hoe “ianao ihany manao azy,” izay izany mihitsy no nataon'ny tanànan'i Mankosi, ao Cape Atsinanana, ao Afrika Atsimo, mba hiatrehana ny sanda lafon'ny fifandraisandavitr'izy ireo. Tamin'ny alàlan'ny tambajotra mifampidimpiditra iarahan'ilay vondrom-piarahamonina manana, mandeha amin'ny takelaka fakàna angovo amin'ny masoandro, afaka mampiasa finday sy aterineto amin'ny sanda mirary kokoa ankehitriny ireo mponina ao amin'io vohitra io.
Ny Tambajotra Zenzeleni, araka ny niantsoan'izy ireo azy, dia voasoratra ho toy ny kaoperativa iray ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Mankosi, ao anatin'ny Fari-piadidian'ny Nyandeni ao amin'ny faritanin'i Cape Atsinanana, heverina ho iray amin'ireo faritra tsy dia mivoatra indrindra ao amin'ny firenena. Ilay tetikasa, izay ampahany amin'ny tambajotra APC, dia mikatsaka ny hamorona lasitra iray ho fametrahana tolotra fifandraisandavitra maharitra any aminà vohitra mpisava làlana any amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra ao Afrika Atsimo.
Amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, tsy ampy fotodrafitrasa momba ny aterineto ireo faritra ambanivohitra, ary miaraka miasa mba hanova izany ireo fandraisana andraikitra toy ny Zenzeleni.
Ny Tantaran'i Mankosi
Carlos Rey Moreno, mpikaroka ao amin'ny Anjerimanontolon'i Cape Town dia nahita fa ao anaty firenena iray izay tena tsy mitovy be ihany ny vola miditra isan-tokantrano, eo ho eo amin'ny 20 % amin'ny vola miditra aminy no lanian'ireo mponina ao Mankosi ho an'ny fifandraisana. Somary lafolafo ihany io isanjato io raha mitaha amin'ilay tanjona 5% amin'ny vola miditra isambolana, tarehimarika napetraky ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Fifandraisandavitra.
Tanisain'ny Zenzeleni ho toy ny iray amin'ireo olana fototra mahalafo ireny fifandraisana ireny ny tsy fisian'ny fifaninanana any amin'ireo faritra ambanivohitra maro ao amin'ny firenena. Araka izany, mba hanomezana tolotra fifandraisandavitra mora kokoa, nila nandray an-tànana manokana ilay olana ny vohitr'i Mankosi.
Ny mpiara-manorina ny Zenzeleni, Masibulele Jay Siya, izay miasa ihany koa miaraka amin'ny Departemantan'ny Siansan'ny Solosaina ao amin'ny Anjerimanontolon'i Cape Andrefana, dia nilaza toy izao nandritry ny tafa tamin'ny APC :
Ny ankamaroan'ireo olona any amin'ny faritra ambanivohitra ao Afrika Atsimo no tsy manana fotodrafitrasa momba ny aterineto na kely aza, ary voafetra ny fahafahan'izy ireo miditra aminà fahaizamanao sy fari-piainana tsaratsara kokoa amin'ny tontolo misy ankehitriny. Nefa raha te-hanampy ianao, mila manao azy io amin'ny alàlan'ny fandrisihana ny olona amin'ny fomba iray izay ahitan'izy ireo tombony amin'ny fifandraisana. Araka izany dia ny firesahana tamin'ireo manampahefana tany an-toerana no zavatra voalohany tsy maintsy nataonay, nanao izay hahazoana antoka fa ho azo ny hevitry ny tsirairay ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina.
Zavadehibe ny fakàna ny fon'ny vondrom-piarahamonina, araka izany dia nikarakara fivoriana teny am-bohitra ny “inkosi” (mpitarika) mba hanazavana amin'ny antsipirihany ilay tetikasa, hatramin'ny fisafidianana ireo tokantrano hiasa ho toy ny “teboka ifanenana” na mpandray ny teknolojia sy hitsinjara angondrakitra manerana ny tambajotra.
Ny Zenzeleni no manazava ao amin'ny tranonkalany amin'ny antsipirihany misimisy kokoa ny fomba fiasan'ilay tambajotrany mifampidimpiditra:
Ny fahasamihafàna fototra misy eo amin'ny tambajotram-pifandraisandavitra nahazatra sy ny tambajotra mifampidimpiditra dia ilay iray nentim-paharazana tsy maintsy mila foibe midadasika, lafo na andry iray lehibe izay tsy maintsy ipetahan'ny fitaovan'ireo mpampiasa tsirairay (toy ny telefaona finday), raha ilay iray mifampidimpiditra kosa tsy mila afa-tsy teboka kely iray mora vidy, izay ny tsirairay aminy dia afaka mifampitohotohy amin'ireo hafa. Miely mankany amin'ny rantsany iray hafa amin'ilay tambajotra ny hafatra nalefa, na firy na firy ny teboka mpampitohy tsy maintsy teteziny.
Amin'ny tambajotra nentim-paharazana nahazatra, efa fahita ireo andry mampitohy amin'ny andry hafa (sy amin'izao tontolo izao) amin'ny alàlan'ny hosona “backbone” milevina anaty tany na fifandraisana amin'ny onjampeo radio. Ny tambajotra mifampidimpiditra dia mety hanana na tsia ‘gateway’ iray (na tetezana) izay iray ihany amin'ireo teboka ifanenàna ao aminy, izay mifandray ihany koa amin'ny tambajotra nahazatra hatrizay. Na misy iray aza mpikambana iray ao anatin'ilay tambajotra mifampidimpiditra ka manana fidirana amin'ny aterineto, dia afaka ifampizaràn'ny rehetra iny. Saingy mbola mifandray izy samy izy ihany ireo teboka ifanenàna ireo rehefa tsy eo ilay tetezana – ohatra, afaka mifampiantso maimaimpoana amin'ny telefaona ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Mankosi na tapaka aza ny fifandraisana aterineto ao aminy.
Mba ho lasa fananan'ilay vondrom-piarahamonina manontolo dia narahana andianà fikarakaràna antontan-taratasy tsy maintsy ilaina amin'ny fanoratana ny tetikasa ho toy ny kaoperativa ilay fivoriana voalohany niarahana tamin'ireo mponina. Fanampin'izany, ny fanokafana kaonty tany amin'ny banky sy fangatahana fahazoandàlana ary ny tsy fandoavana hetra avy amin'ny Sampandraharaha Tsy Miankina Misahana ny Fifandraisandavitra ao Afrika Atsimo (ICASA) dia samy dingana manandanja tao anatin'ny zotra narahana.
Niaraka tamin'ny tetibola voalohany niantsorohan'ny Anjerimanontolon'i Cape Andrefana ho an'ny fampitaovana sy ny fanofànana, nangataka ny fanampiana avy amin'ireo mponina tao an-toerana ihany koa ilay tetikasa mba hanampy amin'ny fananganana sy fametrahana ireo fotodrafitrasa ho an'ilay tambajotra. Takelaka maka ny angovo avy amin'ny masoandro no manome herinaratra ho an'ilay tambajotra, satria tsy tongan'ny herinaratra ao amin'ilay vohitra, ary manampy amin'ny famahànana ireo telefaona finday.
‘Resaka fiarahana miasa io’
Rehefa nanontaniana momba izay fanamby goavana atrehan-dry zareo, nomarihan'i Siya ny fanoherana fiovàna tany amboalohany:
Miteraka hasosorana ireo fiovàna teknolojika, ary ilainao ny vahaolana maharitra. Any amin'ny faritra maro any ambanivohitra, nahita izahay solosaina mipetraka eo tsy misy olona mampiasa akory satria tsy nisy velively olona nampianatra azy ireo ny fomba tokony atao. Araka izany dia ampahany goavana tamin'ny asanay ny fanomezana tolotra ho an'ireo sekoly, ny fanangonana angondrakitra hahitana hoe inona no mety hilàn-dry zareo ny aterineto, mba hahitan'izy ireo fa ilaina ilay izy, ary ny famoronana vahaolana iray maharitra ho an'ireo mpampianatra mba hampiasa azy ireny miaraka amin'ny mpianany. Talohan'izay dia nisy ireo tetikasa fanofanana, saingy tsy tetikasa nanana fijery niakatra, ka dia tsy lasa ho an'ilay vondrom-piarahamonina tanteraka ilay izy. Ilaina ny fanofanana ary tianay ho eny an-toerana ihany izany no atao, mandalo amin'ireo mponina eo an-toerana, fanofanana mpanofana.
Ny zavatra rehetra momba ny Tambajotra Zenzeleni dia manindry ny maha-zavadehibe ny vondrom-piarahamonina. Tafiditra amin'io ny fanomezana tolotra mifandraika amin'ny teny ampiasain'ny mponina — afaka miditra sy mampiasa an'ireo tolotra mampiasa feo amin'ny teny isiXhosa ireo mpampiasa mba hisafidianany ny tolotra raha tian'izy ireo ny hividy tolotra amin'ny endrika ‘vola aloa mialoha’ na taratasim-piantohana — izay tombony iray amin'ny fananana tambajotra fananan'ny eo an-toerana ihany. Fintinin'i Siya hoe :
Toy ny olona tonga miaraka mba hijery ny olana sy hitady vahaolana iraisana no fahatakaranay ny atao hoe vondrom-piarahamonina. Mazava loatra fa tsy resaka aterineto fotsiny io, fa resaka fiarahana miasa, ny traikefa, ny filàna sosialy, ny fiarahana manangana zavatra.